Y योग व्यायाम र पीठ दुख्नेका लागि योग (स्ट्रेचिंग) | Vondt.net
Back योग व्यायाम पीठ दुख्ने को लागी
06 / 06 / 2016 /0 टिप्पणीहरू/i गुणस्तर लेख, व्यायाम र व्यायाम, पछाडि, व्यायाम stretching/av भोंड्ट
तपाईं आफ्नो पछाडि चिन्ता गर्नुहुन्छ? यहाँ Y योग अभ्यासहरू छन् जसले तपाईंको पछाडि गति बढाउन र पछाडि दुखाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। पीठ दुख्नेको साथ कसैसँग साझेदारी गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
योग र योग अभ्यास उपयोगी हुन सक्छ जब यो कसको मांसपेशी र मांसपेशिहरुमा आराम को लागी आउँछ। हामी मध्ये अधिकांश दैनिक जीवनमा धेरै नै बस्दछौं र यसले पछाडि, फिलाको पछाडि र सीटको मांसपेशीहरू पनि कडा पार्दछ। नियमित तन्काउँदा कडा मांसपेशीहरू र कडा जोड्नेहरूको प्रतिकार गर्न राम्रो उपाय हुन सक्छ।
1. «hrdhva मुख śvānāsana» (स्काउटिंग कुकुर स्थिति)
यो योग स्थिति छाती खोल्छ, पेट को मांसपेशिहरु फैलाउँछ र राम्रो पछाडि तल्लो पछाडि सक्रिय हुन्छ। तपाईंको हत्केलाहरू फ्लोरको बीचमा फल्याकको बीचमा पट्टि झुण्डिएर सुरू गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्ना खुट्टाहरू सँगै तान्नुहोस् र तपाईंको खुट्टाको माथि प्रेस गर्नुहोस् भुईंको बिरूद्ध दायाँ - एकै समयमा तपाईंको पछाडिबाट शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईंको हात होइन तर तपाईंको छाती फर्शबाट उठाउन। तपाईंको खुट्टा सिधा राख्नुहोस् र5देखि १० गहिरा सासको लागि स्थिति समात्नुहोस्। तपाईंलाई आवश्यक भए जस्तो धेरै पटक दोहोर्याउनुहोस्।
2. "Ardha Matsyendrasana" (रोटेशन व्यायाम)
यो बसेको योग स्थिति मेरुदण्ड र पछाडि मांसपेशिहरु मा लचीलापन र आन्दोलन प्रदान गर्दछ। यो एक मांग व्यायाम हुन सक्छ, त्यसैले यो लेख को प्रयास नगर्नुहोस् यदि तपाइँ लेख मा अन्य अभ्यास संग सहज लाग्दैन। गहिरो सास फेर्नुहोस् र शान्तसाथ साइडमा फर्कनुहोस् - झर्को नबनाउनुहोस्, बरु धेरै शान्तसँग छेउमा जानुहोस्। - deep गहिरो सासको लागि स्थिति समात्नुहोस् र अर्कोपट्टि दोहोर्याउनुहोस्।
Bala. बालसाना (छाती र पछाडि तान्न)
तपाईंको घुँडामा उभिनुहोस् र तपाईंको शरीर फैलिएको हतियारको साथ अघि झर्नुहोस्। घाँटीको बिरूद्ध आफ्नो टाउको विश्राम गर्नुहोस् र घाँटी र माथिल्लो पछाडि संक्रमणमा हल्का खिचाउँ नभएसम्म तपाईका अगाडी आफ्नो हड्डीहरू तन्काउनुहोस्। Seconds० सेकेन्ड अवधिको sets-। सेट गर्दछ।
5. «Kapotasana Du (Duestillingen)
पोज स्थिति शुरुआतीहरूको लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ किनकि यसले हिप र घुडामा केही लचिलोपन आवश्यक गर्दछ। यो प्रभावकारी हुनुको कारण कडा हिप्सले पछाडि दुखाइ दिन सक्छ। To देखि १० गहिरा सासको लागि स्थिति समात्नुहोस्, त्यसपछि अर्को तर्फ स्विच गर्नुहोस् र आवश्यक अनुसार दोहोर्याउनुहोस्।
यो सबै तपाईं मा निर्भर गर्दछ। सुरुमा तपाइँको लागि के काम गर्छ पत्ता लगाउनुहोस् र बिस्तारै निर्माण गर्नुहोस् तर निश्चित रूपमा अगाडि बढ्दो छ। याद गर्नुहोस् कि व्यायामले सुरुमा कोमलता निम्त्याउन सक्छ, किनकि तपाईंले बिस्तारै बिग्रिएको क्षेत्रहरू (बिग्रिएको टिश्यू र दाग टिश्यू) लाई बिस्तारै बिग्रिदिनुहुन्छ र यसलाई स्वस्थ, कार्यात्मक नरम टिश्युको साथ बदल्नुहुन्छ। यो एक समय खपत तर धेरै इनामदायी प्रक्रिया हुन सक्छ। यदि तपाईंलाई निदान छ भने, हामी तपाईंलाई तपाईंको क्लिनशियनलाई सोध्न सोध्छौं यदि यी अभ्यासहरू तपाईंको लागि लाभदायक हुन सक्दछन् - सम्भवतः आफैलाई सावधानीपूर्वक प्रयास गर्नुहोस्। हामी अन्यथा तपाईंलाई यस कदममा हुन र सम्भव भएमा कुनै न कुनै इलाकामा पैदल यात्रामा जान प्रोत्साहित गर्दछौं।
सहकर्मीहरू, साथीहरू र परिचितहरूसँग यी अभ्यासहरू साझेदारी गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। यदि तपाईं पुनरावृत्ति र यस्तै कागजातको रूपमा पठाइएको व्यायामहरू चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सोध्दछौं जस्तै र फेसबुक पेज पाउनुहोस् मार्फत सम्पर्कमा रहनुहोस् यहाँ। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने जानुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
अर्को पृष्ठ: - ब्याक दर्द? तपाईंले यो जान्नुपर्दछ!
मांसपेशिहरु, स्नायुहरु र जोड्ने दुखाई विरुद्ध पनि म के गर्न सक्छु?
6. रोकथाम र उपचार: जस्तो कम्प्रेसन आवाज यो जस्तै प्रभावित क्षेत्रमा रगत संचार बढाउन सक्दछ, यसैले घाइते वा लगाइएको मांसपेशिहरु र टन्डनहरूको प्राकृतिक उपचारको गति बढाउँदछ।
दुखाइमा दुखाइ राहतको लागि सिफारिस गरिएका उत्पादहरू
पनि प्रयास गर्नुहोस्: - ISJIAS बिरूद्ध राम्रो सल्लाह र उपायहरू
यी अभ्यासहरू पनि प्रयास गर्नुहोस्: - मजबूत हिप्स को लागी6शक्ति अभ्यास
यो पनि पढ्नुहोस्: - घाउ घुँडाको लागि Eff प्रभावशाली शक्ति व्यायाम
के तपाईंलाई त्यो थाहा थियो: - चिसो उपचारले दुखाइ दुखाइ र मांसपेशिहरुमा दुख दिन सक्छ? अन्य कुराहरु, बायोफ्रीज (तपाईं यहाँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ), जसमा मुख्यतया प्राकृतिक उत्पादहरू समावेश गर्दछ, एक लोकप्रिय उत्पादन हो। हामीलाई आज हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई आवश्यक परे अन्य सिफारिशहरू चाहिन्छ भने।
यो पनि पढ्नुहोस्: - कडा हड्डीहरूको लागि गिलास बियर वा वाइन? हो, कृपया!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yogaklasse.jpg?media=1648573622 393 750 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2016-06-06 19:52:582022-03-18 17:25:18Back योग व्यायाम पीठ दुख्ने को लागी
अध्ययन: स्ट्रबेरीले कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्दछ अध्ययन: जैतुनको तेलमा पोषक पदार्थले क्यान्सर सेलहरू मार्न सक्दछ